Mweya Mutsvene Vanokuwedzera Simba
"Nemhaka iyi ndinopfugama namabvi angu kuna Baba, rudzi rwose kudenga napanyika runotumidzwa nezita ravo, kuti vakupei papfuma yokubwinya kwavo kukuru, simba kuti musimbiswe noMweya wavo mumunhu womukati" (VaEfeso 3 ndima 14 kusvika 16).
Tine ndima yatavhura nayo. Yakanyorwa naApostora Pauro. Akanga ari kunyengetera. Aitungamimirirwa naMweya Mutsvene. Ane Vakristu vaakanga ari kunyengeterera. Vakristu ava vakanga vari paEfeso. Aida kuti mweya yavo isimbiswe. Kureva kuti mweya waPauro wakanga wakatosimbiswa. Saka aiziva kukosha kwazvo. Zvekare, aiziva kuti Vakristu vanofanira kusimbiswa. Ichi hachisi chinhu chakavimbiswa naMwari. Chinhu chatakatopiwa. Chinhu chatinogona kuwana. Mweya yedu inogona kugara yakasimba.
Asi Pauro akanyengeterera vatsvene ava. Sei akafanira kudero? Nokuti vakanga vasati vanzwisisa. Vakanga vaina Mweya Mutsene. Mweya Mutsvene ava vaigara mukati mavo. Kureva kuti vakanga vaine simba. Simba iri rakanga riri reVamwari. Asi vaisaziva nezvaro. Pauro aitsvaka kuti varizive. Vagorarama sevanhu vanaro. Simba iri haribvi kudenga. Unoripiwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vanotova mukati mako. Ndizvo zvavaifanira kunzwisisa.
Mweya Mutsvene vari mukati mako. Mweya Mutsvene ava ndivo vanokusimbisa. Vanokupa simba. Simba iri ndere Vamwari. Rinoita kuti ugone kuita zvinhu. Hareruya! Ndiko kusaka usingafaniri kutaura semunhu asina simba. Mweya Mutsvene vava kugara mauri. Saka hauchina hutera. Mweya Mutsvene ava ndivo vakatakura kubwinya kwaMwari. Ndivo vane simba rose. Vakauya mauri netwavo twose. Saka hapana nhengo yemuviri wako inogona kubata chirwere. Satani haachina paanokwana mauri. Mweya Mutsvene ndivo vanokusimbisa. Vanosimbisa mweya wako. Vanosimbisa moyo wako. Vanosimbisa muviri wako wenyama. Vanoita kuti ugare uine hupenyu.
VaRoma 8 ndima 11 inoti, "Zvino kana Mweya waiyeyo akamutsa Jesu kuvakafa achigara mukati menyu, iye akamutsa Kristu Jesu kuvakafa, achaponesa miviri yenyu inofa noMweya wake, unogara mukati menyu". Mweya Mutsvene vava mauri. Kureva kuti vari kutochengeta muviri wako. Vari kuuchengeta uri mupenyu. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Ndiri kupiwa simba. Simba iri riri kupinda muzvinhu zvangu zvose. Isimba rinoshanda minana. Mweya Mutsvene vari mandiri. Vari mumweya mangu. Vari kugwinyisa mweya wangu. Saka hapachina chandinokoniwa kuita. Ndine simba randava naro. Iri isimba reVamwari. Simba iri riri kushanda mandiri. Riri kushanda zvikuru. Hareruya!